Isilimela 24, 2018 admin
Bitcoin kusithwa kwinqanaba layo liphantsi ukususela ngoNovemba 2017
Bitcoin kunanini engaphantsi ukususela ngoNovemba kunye ixabiso layo liye lehle ngomyinge $ 1,000 kwiintsuku ezimbini yokugqibela ukufikelela elisezantsi elitsha $ 5,800.
Le ndawo kunazo zonke iinyanga ezininzi, kunonyaka February, xa liwela $ 6,000, kunonyaka Apreli, xa kwaba phezu $ 6,000 ibe ngaphantsi kwe ixabiso ukususela ku-Oktobha, ngaphandle ukuba ukuwa emfutshane ngoNovemba.
Imiqulu yayo nabo baye benqaba malunga $ 3.6 billion, inxenye umthamo wayo womnatha ngoku eyachithwayo 0.46 MB bitcoin Ubungakanani Befayile.
Oku ngaphantsi kakhulu ngaphezu ukusilela ezibalulekileyo ukuze kubonwe, njengoko blockchain Bitcoin kaThixo ngoku kusetyenziswa ngaphantsi kunokuba kwakunjalo 2015.
kunjalo, isabelo sawo imakethi ezandayo, kodwa capitalisation lweentengiso baya kuwa nje ngaphantsi $ 100 billion okokuqala kwiinyanga ezininzi.
Ngokwenene akukho sizathu ukuba igama yokukwehla kutshanje. bekungekho exchange, iminyaka emine akukho dada elimnyama ungashiywanga Bitcoin.
Kusenokwenzeka ke ngoko ukuba ibe kwimeko nokuthengela amarhe, ngokuthengisa iindaba, amarhe ukuba mpikiswano scalability kuthatha indawo, kwaye iindaba kokuqala Lightning Network (LN).
Le yokugqibela kulindeleke ukuba ngokuphoxa kufikelela network Bitcoin yonke uyakhathala, njengoko imisebenzi inkqubo accounting ngoko kwahlukile transaction blockchain.
Kuye wasebenzisa yayigcinwa, kodwa okunye zemihla ngemihla, i bitcoin LN uba bitcoins kancinci akuncedi ngakumbi ecaleni elula ukuba sele angakhululeki ngokwazo.
Ukusebenziseka le nto leyo yenziwa kudala, kunye cryptos sesihambe umgama kwicala elifanelekileyo, kodwa ngoku msebenzi Bitcoin ethile yanexatyiswana nzima kakhulu.
Kodwa akukho mntu kwabonakala ukuba abakhathalele ezimqoka ngaphandle izityholo zawo $ 70 kwaye wonke umntu ukuqala ukuthengisa. Nhlamuselo real wakwazi ukuba unikezelo elula kunye nemfuno.
Unikezelo elixholwe olunesiqingatha ukulungiselela Bitcoin ngo 2016, ukuze ixabiso bavuka ngokucotha wavuka, ngoko ngoDisemba ukuba bavuke ngokukhawuleza.
Ngelo xesha ngakumbi nangakumbi imigodi weza hardware. Ngoku la parameters ezimbini kwaneliswe imfuno zama ukufikelela ukulingana.
Apho loo anokubonwa, kwaye lizoba kufuneka kwifayile kuqala bankruptcy, mene uya kungekudala kuthi. Ngeli xesha, mhlawumbi Bitcoin enye kwakhona ukufumana into ngaphezu ixabiso uyakwazi ukuthetha kuba ixabiso akwazi ukufumana uyadika okwethutyana.
Ingxelo Daily Market Kraken for 23.06.2018
$153M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje